၂၁ နိုဝင်ဘာ၊ ၂၀၂၁
မမြသဇင်အောင် (VOA) နဲ့ နတ္ထိရောင် အိပ်မက် ရုပ်ရှင်အဖွဲ့သားများ
လူ့အခွင့်အရေး တရပ်ဖြစ်တဲ့ လိင်သတ်မှတ်ချက်ကွဲလွဲသူ LGBTQ တွေရဲ့ အခွင့်အရေးအတွက် ကြိုးပမ်းနေရဆဲဖြစ်ကြောင်း နိုင်ငံတကာ ရုပ်ရှင်ပွဲတော်တွေမှာ ပြသနေတဲ့ Imperfectly Complete “နတ္ထိရောင် အိပ်မက်” ရုပ်ရှင်ကားတို အဖွဲ့သားတွေက ပြောပါတယ်။ မမြသဇင်အောင် ဆက်သွယ် မေးမြန်းထားပါတယ်။
မေး ။ ။ ပထမဦးဆုံး ကျမ ထုတ်လုပ်သူ ကိုဝဏ္ဏမျိုးသိန်းကို မေးချင်ပါတယ်။ Imperfectly Complete “နတ္ထိရောင် အိပ်မက်” လို့ နာမည်ပေးထားတဲ့ မြန်မာ Transgender လိင်အင်္ဂါ ပြောင်းထားတဲ့သူ တယောက်ရဲ့အကြောင်း ရုပ်ရှင်တိုလေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ သတင်းဌာနတချို့မှာလည်း မေးမြန်းထားတာကို ကျမတို့ အများကြီးတွေ့ပါတယ်။ နောက် မြန်မာဘာသာနဲ့ အင်္ဂလိပ်ဘာသာတို့နဲ့ ပြောထားတဲ့ ဒီဇာတ်ကားပေါ်မှာ အသိအမှတ်ပြုတာတွေ ပိုပြီးတော့ တိုးလာနေတာကိုလည်း တွေ့တယ်။ ဆုတွေ ရတာကိုလည်းတွေ့တယ်။ ဒီရုပ်ရှင်ပွဲတော်တွေမှာ တော်တော်များများ ပြသနေတာတွေလည်း တွေ့တယ်။ ဒီရုပ်ရှင်ကားက မျက်မမြင်ဂီတသမားတယောက်ကို ကူညီစောင့်ရှောက်ပေးနေတဲ့ Transgender အမျိုးသမီးတယောက်ရဲ့အကြောင်း။ အဲဒီတော့ ဂစ်တာသမား လူငယ်လေးက သူက မျက်ကြည်လွှာရပြီးတော့ အလှူရှင်ရပြီးတော့ မျက်စိပြန်မြင်တော့မယ့်အချိန်မှာ သူကို အမှန်အတိုင်း ဖွင့်ပြောဖို့ ခက်နေတဲ့ Transgender တယောက်အကြောင်းကို ရိုက်ကူးထားတာကိုလည်း ကျမတို့ သိရတယ်။ အဲဒီမှာ ကျမ သိချင်တာက ဒီရုပ်ရှင်ကားတိုလေးကို နတ္တိရောင် အိပ်မက်လို့ ဘာလို့နာမည်ပေးထားတာပါလဲရှင့်။
ဖြေ ။ ။ အဲဒီ idea က တကယ်တမ်း ရလာတာက ခရစ္စီဆီက ရပါတယ်။ She is part of the producer. ကျနော်တို့ decision လုပ်တဲ့အချိန်မှာ အားလုံးတိုင်ပင်ပြီး လုပ်ကြတယ်။ I think အဖြေက most likely ခရစ္စီ ဖြေရင် ပိုကောင်းမယ် ထင်ပါတယ်။ ဖြစ်ချင်တာလေးတခု မဖြစ်နိုင်ဘူး ဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့ Social injustice တခု။ In period တခု။ အဲဒါကြောင့် အိပ်မက်က ထိလိုက်တယ်။ ဒါပေမဲ့ ပျောက်သွားတယ်။ ခဏပျက်ပြယ်သွားတယ်။ အဲဒီလိုသဘောမျိုးလို့ ကျနော်တော့ ယူဆတယ်။ ဒါပေမဲ့ ခရစ္စီ ဖြေရင်တော့ ပိုကောင်းတယ်။ နတ္တိရောင် အိပ်မက် ဆိုတဲ့နာမည်က ခရစ်တီ ရလာတဲ့ နာမည်ပါ။
မေး ။ ။ မခရစ္စီ ဒီပေါ်မှာ နည်းနည်းလေး ရှင်းပြပေးပါအုံး။
ဖြေ ။ ။ ပထမတုန်းကတော့ Imperfectly Complete လို့ပဲ ထားထားတာပေါ့။ အင်္ဂလိပ်နာမည်ပဲ ပေးထားကြမယ်ပေါ့။ နောက်ကျတော့ ကျမတို့အားလုံး သေသေချာချာ ပြန်စဉ်းစားကြတယ်။ ဒါရိုက်တာ၊ ပရိုဂျူဆာတွေ - ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ Dialogue တွေ အကုန်လုံးက မြန်မာလို ပြောထားတာ တော်တော်များတယ်။ အဲဒါကြောင့် မြန်မာနာမည်ပေးမှ ဖြစ်မယ်လို့ ပြန်ဆုံးဖြတ်ကြတယ်။ ဆုံးဖြတ်ကြတော့ အကုန်လုံး နာမည်တွေ လျှောက်ရွေးကြတယ်။ အဲဒီတော့ ဒီ story ရိုက်ပြီးတဲ့အခါမှာ ကျမရဲ့ သူငယ်ချင်း ရုပ်ရှင်မင်းသား New York မှာနေတဲ့ ဥက္ကာမင်းမောင်ကို ပြောပြလိုက်တယ်။ ဒီဇာတ်ကားအတွက် နာမည်လေး ရှာကြရအောင်ဆိုပြီး သူနဲ့ ကျမတို့ ရှာကြတယ်။ သူက အဓိက ရှာပေးတယ်။ ပထမတော့ နတ္တိရောင် ကောင်ကင်။ နောက်တခုက နတ္တိရောင် အိပ်မက်။ နောက်တခုက နတ္တိရောင် မိုးပြာ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ နတ္တိရောင် - နတ္တိဆိုတဲ့စကားက ဗလာနတ္တိက လာတာ။ သူကလည်း မျက်မမြင်ဘူး။ သူ့ရဲ့ dream က သူ့ကိုယ်သူလဲ ဘယ်တော့ မျက်စိပြန်မြင်မလဲဆိုတာ မသိဘူး။ ခရစ္စီကလည်း အဲဒီအထဲမှာ Transgender တယောက်ဆိုတော့။ ဒီ Transgender တယောက်ရဲ့ ချစ်တဲ့အချစ်ကို သူ့ကိုချစ်တဲ့အချစ်နဲ့ ညီမျှတဲ့အချစ်ကို ပြန်လိုချင်တယ်။ ပြန်လိုချင်တော့ အဲဒီအချိန်မှာ သူက ကိုယ့်ကိုယ် ပြန်ချစ်ပါ့မလားဆိုတဲ့ အိပ်မက်ကလဲ အကောင်ထည်ဖော်နိုင်မလား။ မဖော်နိုင်သလား မသိဘူး။ အဲဒီမှာ နှစ်ယောက်စလုံးက ဗလာနတ္တိ ဖြစ်နေတဲ့ အိပ်မက်တွေနဲ့ပေါ့။ အဲဒီမှာ ဗလာနတ္တိ အိပ်မက်ကိုမှ နာမည်တွေ စဉ်းစားရင်နဲ့ နတ္တိရောင် အိပ်မက်လို့ ဖြစ်သွားတာပါ။
မေး ။ ။ အခုဆက်ပြီးတော့ မေးချင်တာက ဒါရိုက်တာ Bruce ပါ။ အခုလို ဆုတွေရတာကို ဂုဏ်ယူပါတယ်ရှင်။ Imperfectly Complete ရုပ်ရှင်ဇာတ်လမ်းတိုက ဆုတွေရနေသလို၊ နိုင်ငံတကာ ရုပ်ရှင်ပြပွဲတွေမှာ ပြသနေတာကိုလည်း တွေ့ရပါတယ်။ ဒီတော့ ဒီဇာတ်ကားကို ဖန်တီးခဲ့တဲ့ ဒါရိုက်တာတယောက်အနေနဲ့ ရှေ့လျှောက်မှာကော ဒီဇာတ်ကားကို လူတွေအသိအမှတ် ပြုလာဖို့နဲ့ ဆုတွေထပ်ပြီးတော့ ရဖို့အတွက် မျှော်လင့်ထားပါသလားရှင့်။
ဖြေ ။ ။ ကျနော့်အနေနဲ့ ဒီလောက်အထိ ဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ မမျှော်လင့်ထားပါဘူး။ တကယ့်ကို အံ့သြဝမ်းသာမိပါတယ်။ ရုပ်ရှင်ဖန်တီးသူတယောက်က သူ့ဇာတ်ကားမပြီးခင် ပရိသတ်တွေအကြိုက် တွေ့ပါ့မလားဆိုတာကို ကြိုမသိနိုင်ပါဘူး။ ဇာတ်ကားတိုင်းက သူတို့အတွက် ကြိုးစားစမ်းသပ်မှုပါ။ အခု ဒီလိုဆုတွေရတော့ ပရိသတ်က ကျနော်တို့ ဖန်တီးမှုကို မြတ်နိုးတယ်၊ ကြိုက်တယ်။ ဒီအတွက် ကျနော်တို့ တဖွဲ့သားလုံး ပျော်ရွှင်ရသလို၊ စိတ်လှုပ်ရှားရပါတယ်။
မေး ။ ။ ကိုဇော်မျိုးထက်က ဒီ Imperfectly Complete - နတ္တိရောင်အိပ်မက် ရုပ်ရှင်ကားထဲမှာ အမြင်အာရုံကွယ်နေတဲ့ ဂီတာသမား လူငယ်တယောက်အနေနဲ့ သရုပ်ဆောင်ထားပါတယ်။ ဒီကားမှာ ဘယ်လိုစပြီးတော့ ပါဝင်သရုပ်ဆောင် ဖြစ်တာပါလဲ။
ဖြေ ။ ။ ကျနော်စပြီးတော့ သရုပ်ဖြစ်တာက Bruce နဲ့ သိတာကတော့ တော်တော်ကြာပြီ။ သုံးနှစ်လေးနှစ်လောက်တော့ ရှိပြီ။ အဲဒါနဲ့ သူက ဒီဇာတ်ညွှန်းရေးပြီးတဲ့ အချိန်မှာ သူက ဂီတာလည်းတီး၊ သီချင်းလည်း ဆိုတတ်တဲ့ သရုပ်ဆောင်တယောက် လိုက်ရှာနေတဲ့ အချိန်မှာ သူက ကျနော့်ကို လာပြီးတော့ ကမ်းလှမ်းလာတယ်။ နောက်ပြီးတော့ သူ့ရဲ့ဇာတ်လမ်းအကြောင်းကို ကျနော့်ကို ပြောပြတယ်။ ကျနော်က မိုက်တယ်။ ဇာတ်လမ်းလေးက တော်တော်ကောင်းတယ်။ စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်။ ကျနော်လည်း ဂီတာကိုယ်တိုင် တီးတတ်တော့၊ မဆိုးဘူး - This is something I can contribute. ဇာတ်လမ်း။ နောက်ပြီးတော့ မျက်မမြင်အနေနဲ့ သရုပ်ဆောင်ရမည်ဆိုတော့လည်း ဒါက Challenge တခုပေါ့။ ကျနော်လည်း စိတ်ဝင်စားသွားပြီးတော့ သူ ကမ်းလှမ်းလာတဲ့အချိန်မှာ ကျနော် လက်ခံလိုက်တယ်။
မေး ။ ။ ဒီဇာတ်ကားရိုက်ကူးမယ်ဆိုတဲ့ အချိန်မှာ အတားအဆီး အဟန့်အတားတွေ ရှိသလား။ ကိုယ့်ရဲ့ ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ လွတ်လွတ်လပ်လပ် ဆုံးဖြတ်ခွင့်ရခဲ့တာလား။
ဖြေ ။ ။ ကိုယ့်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ အတားအဆီးလည်း ဘာမှမရှိပါဘူး။ အကုန်လုံး မိဘတွေ၊ သူငယ်ချင်းတွေ အကုန်လုံးကို ပြောပြတယ်။ သူတို့က ကောင်းတယ်၊ လုပ်ပေါ့။ ဇာတ်လမ်းလေးလည်း ကောင်းတယ်။ လုပ်ဆိုပြီးတော့ အားပေးကြတယ်။
မေး ။ ။ အဲဒီတော့ ကိုဝဏ္ဏရဲ့ ဒီဇာတ်ကားက သာမန်ဇာတ်လမ်းကျောရိုးတခု မဟုတ်ဘူး။ အဲဒီတော့ သာမန်ဇာတ်လမ်းကျောရိုးကို အခြေခံထားတဲ့ ဇာတ်ကားတခု မဟုတ်ဘူးပေါ့။ လိင်အင်္ဂါပြောင်းထားတဲ့ လူတယောက်ရဲ့ မေတ္တာတရားနဲ့ သူ့ရဲ့ခံစားချက်တွေကို ဖွဲ့ဆိုထားတယ်။ ဒီလို ပုံမှန်သာမာရိုးကျ ဇာတ်လမ်းကျောရိုး မဟုတ်တဲ့အတွက် ရိုက်ကူးတဲ့နေရာမှာ ဘယ်လို အခက်အခဲတွေကို ကြုံတွေ့ခဲ့ရပါသလဲ။
ဖြေ ။ ။ ဒီဟာက Transgender လိင်အင်္ဂါ ပြောင်းထားတယ် ဘာညာပြောပေမယ့်။ Still ကျနော်တို့ Humanitarian လူအရကြည့်ရင် still they are people. ကျနော်တို့ ပုံမှန်အနေအထားဆိုရင် လူမျိုးမတူလို့၊ ဘာသာမတူလို့ ချစ်လို့မရဘူး၊ ကြိုက်လို့မရဘူးဆိုတာ ရှိတာပဲ။ အခု ဒီဟာက ဆင်တူရိုးမာလေးလို့ ကျနော်က ယူဆပြီးတော့ သွားတာ။ အဲဒီတော့ ကျနော်ကတော့ အရမ်းပြဿနာ ဖြစ်တယ်လို့တော့ - Debate ဖြစ်မယ်လို့တော့ ကျနော်က မထင်ဘူး။ This is still art. It’sagood art.
မေး ။ ။ အဲဒါဆိုရင် မခရစ္စီကို အလှည့်ပေးအုံးမယ်။ နိုင်ငံတကာမှာတော့ လိင်အင်္ဂါကွဲပြားတယ်။ ပြောင်းတယ်။ လိင်စိတ်ကွဲပြားတယ်ဆိုတဲ့ လူတွေပေါ်မှာ တန်းတူထားဖို့။ ပြီးတော့ ခွဲခြားပြီးတော့ မဆက်ဆံဖို့။ ခွဲခြားမသတ်မှတ်ဖို့ တောင်းဆိုဆော်သြနေတာတွေလည်း ရှိပါတယ်။ ပြီးတော့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို သတ္တိရှိရှိ ဖော်ထုတ်ဖို့ အားပေးတာတွေလည်း ရှိပါတယ်။ ဒီလို နိုင်ငံတကာရဲ့ အသိအမှတ်ပြုမှုတွေ ပိုပြီးတော့ ရလာတဲ့အခါမှာ ဒီရုပ်ရှင်အပေါ်မှာ နိုင်ငံတကာ အသိအမှတ်ပြုမှုတွေ ပိုပြီးတော့ ရလာတဲ့အတွက် မြန်မာနိုင်ငံလို လူ့အဖွဲ့အစည်းမှာကော လိင်စိတ်ကွဲပြားတဲ့လူ၊ ဒါမှမဟုတ် လိင်တူချစ်သူတွေပေါ်မှာ အများစုရဲ့ အမြင်သဘောထားတွေက ပြောင်းလဲလာမယ်လို့ မျှော်လင့်ပါသလား။
ဖြေ ။ ။ ဟုတ်ကဲ့ ခရစ္စီ မျှော်လင့်ပါတယ်။ ၂၀၂၁ ကတော့ အရင်နှစ်တွေလို မဟုတ်တော့ဘူးပေါ့။ ဒါပေမဲ့ မြန်မာ့လူ့အသိုင်းအဝိုင်းမှာက ရှေးရိုးဆွဲအယူအဆတွေ ရှိတယ်။ နောက်ပြီးတော့ Transgender တယောက်၊ မိန်းမလျှာတယောက်။ နောက် လူအများနောက်ပြီးပြောတဲ့စကားတို့၊ နှိမ်ပြီးပြောတဲ့စကားတို့ဆိုရင်တော့ အခြောက်ပေါ့။ ဒါပေမဲ့ အဲဒါလဲ သာမာရိုးကျစကားလို ပြောလို့ရတယ်။ သူတို့က အဲဒီနာမည်ကို ခေါ်ရတာ တွင်နေပြီ။ ဒီမှာတော့ Transgender, Gay ဆိုလဲ Gay, Lesbian ဆိုလဲ Lesbian ပေါ့။ သူ့ဟာနဲ့သူ ရှိထားတယ်။ ဒါပေမဲ့ ခရစ္စတီတို့ အခု အရေးကြီးဆုံးက ဘာလဲဆိုတော့ Transgender Rights ကို တောင်းယူရပါမယ်။ Transgender Rights က Human Rights ပါပဲ။ အတူတူပါပဲ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ Transgender တွေကလဲ Human ဖြစ်လို့ပါပဲ။ သူက Transgender တယောက်ဖြစ်တယ်။ သူက Gay တယောက်ဖြစ်တယ်။ သူက Lesbian တယောက် ဖြစ်တယ်ဆိုပြီး အထူးအခွင့်အရေးတွေအနေနဲ့ တောင်းဆိုတာ မဟုတ်ပါဘူး။ သာမန်လူတန်းစေ့ ရနေတဲ့ အခွင့်အရေးကိုပဲ ခရစ္စီတို့က တောင်းဆိုနေတာပါ။
ဒီမှာတော့ Transgender တွေကို Protect လုပ်တဲ့ LGBTQ Protect လုပ်တဲ့ Regulations, Laws တွေ ရှိကြတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒီနိုင်ငံမှာတော့ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ဖြစ်နေပြီ။ စစ်တပ်ထဲမှာလည်း LGBTQ လူတယောက်အနေနဲ့ ဝင်ပြီးတော့ အမှုထမ်းလို့ရတယ်။ ဘယ်ရုံးမှာမဆို တက်လို့ရတယ်။ ဘယ်အစိုးရဝန်ထမ်းမဆို ဝင်လုပ်လို့ရတယ်။ Governor တို့၊ တချို့ ပြည်နယ်က Governor တွေ၊ ဘာတွေဆိုရင် အကုန်လုံး Transgender တွေ ဖြစ်နေကြတာ ဒီနိုင်ငံ။ အဲဒီတော့ ခရစ္စတီတို့အနေနဲ့ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံတွေနဲ့ ရင်ဘောင်တန်းပြီးတော့ ခရစ္စတီတို့ နိုင်ငံမှာလဲ Transgender Rights, LGBTQ rights တွေ၊ ဒီ NCPTQ တွေကို Protect လုပ်ပေးနိုင်မယ့် လူ့အဖွဲ့အစည်းတွေက Advocate တွေ မားမားမတ်မတ် ရပ်တည်ပေးမယ့် လူတွေကတော့ ပိုမိုလိုအပ်လာတယ်လို့ ထင်တာပဲ။ အဲဒီလိုလူတွေ၊ အဖွဲ့အစည်းတွေ ရှိမှ။ ဒီ Transgender, LGBTQ အသိုင်းအဝိုင်းကြီးက ပိုမိုတိုးတက်တဲ့ လူ့အဖွဲ့အစည်းတခုကို ရောက်သွားမယ်လို့ ကျနော် ထင်ပါတယ်။
မေး ။ ။ အထူးသဖြင့်တော့ Asia မှာပေါ့ ရှေးရိုးဆွဲအယူအဆကို ကိုင်ဆွဲတာများတဲ့ လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းတွေအတွင်းမှာ Transgender တွေ လိင်စိတ်ခံယူချက် ကွဲပြားသူတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ ခွဲခြားဆက်ဆံတာတွေ၊ လက်မခံတာမျိုးတွေ ရှိပါတယ်။ ဒီလိုအသိုင်းအဝိုင်းဟာ ဒီရုပ်ရှင်ဇာတ်လိမ်းတိုလေးက ရိုက်ခတ်မှုတခု ရှိလာမယ်လို့ ထင်ပါသလား။ ဒီရုပ်ရှင်ဇာတ်လမ်းကတဆင့် အပြောင်းအလဲတခုခု ဖြစ်လာမယ်လို့ မျှော်လင့်သလား။ နောက်ပြီးတော့ ဒီလိုလိင်စိတ်ခံယူချက် ကွဲပြားတဲ့လူတွေကို လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းမှာ ပိုပြီးတော့ အသိအမှတ်ပြုလာမယ်လို့ကော ထင်မိပါသလားရှင်။
ဖြေ ။ ။ LGBTQ တွေနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ဇာတ်လမ်းတွေကို ပိုလုပ်ချင်တယ်ဆိုတာ သူတို့အကြောင်း လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းက ပိုပြီးသိလာအောင်လို့ပါ။ သူတို့အကြောင်း ပိုပြီးသိလာရင် သူတို့နဲ့ ဝေးကွာတယ်လို့ မခံစားရတော့ဘူးပေါ့။ ဒါကြောင့် ကျနော်ထင်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ဒီဇာတ်လမ်းမှာ ပျော်စေစရာ အဆုံးသတ်ထားတာက တခြား LGBT ဇာတ်လမ်းတွေနဲ့ မတူတာပါ။ တခြားဇာတ်လမ်းတွေမှာက သူတို့ကို မကောင်းမြင်တဲ့သဘော ပုံဖော်ကြတာ များပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကျနော်တင်ပြချင်တာက ဒီလို Transgender တယောက်ဟာလဲ ကောင်းမွန်တဲ့ ဆက်ဆံရေး ရှိတယ်။ ချစ်ချင်းမေတ္တာ ရှိတယ်။ သူတို့က ရဲစွမ်းသတ္တိ ရှိသလို၊ အကြင်နာတတ်တယ်ဆိုတာကို ပြသချင်တာပါ။ တကယ်က ဒီမတိုင်မီ မနှစ်က တခြားရုပ်ရှင်ဇာတ်လမ်းတခု ရိုက်ဖို့ စီစဉ်ထားတာပါ။ ခရစ္စတီရဲ့ တကယ်ဖြစ်ရပ်မှန်ဇာတ်လမ်းပေါ့။ ဒါပေမဲ့ ကိုဗစ်ကြောင့် မလုပ်ဖြစ်ခဲ့ပါဘူး။ ဒါကြောင့် ဒီအတိုင်း စောင့်နေမယ့်အစား၊ နောက်တခု ဇာတ်လမ်းတိုလုပ်ရင် အဖွဲ့သားတွေ တယောက်အကြောင်းတယောက် ပိုနားလည်လာမယ်ပေါ့။ ဒါက ရုပ်ရှင်ဖြစ်လာတဲ့အစပါပဲ။ အစတုန်းကတော့ ဒီဇာတ်လမ်းမှာ ဇာတ်ကောင်နေရာက ဂီတသမား မဟုတ်ပါဘူး။ ပန်းချီဆရာပါ။ ဒါပေမဲ့ အဲဒီလိုဆိုရင် ကျနော်တို့ရဲ့ ဘတ်ဂျက်နဲ့ မလောက်နိုင်ပါဘူး။ ဒီတော့ ဂီတသမားဆိုရင် ကောင်းမယ်လို စဉ်းစားလိုက်ပါတယ်။ ဇော်ကလည်း သီချင်းဆိုကောင်းသလို၊ ဂီတာလည်း တီးတတ်ပါတယ်။ အဆင်ပြေပါတယ်။
မေး ။ ။ ကိုဇော်မျိုးထက်ကို ထပ်မေးချင်တာက တခုကတော့ ဒီရုပ်ရှင်ကားလေးကနေ ကိုဇော်မျိုးထက်အနေနဲ့ ဘာတွေထပ်ပြီး မျှော်လင့်ထားတာ ရှိပါသလဲ။
ဖြေ ။ ။ နောက်ထပ် အများကြီးပြိုင်နိုင်ပြီးတော့ ဆုတွေအများကြီး ရနိုင်ပါစေလို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။
မေး ။ ။ နောက်ထပ်ကော ဒီလိုဇာတ်လမ်းမျိုးတွေကို ပါဝင်ပြီးတော့ သရုပ်ဆောင်ဖို့ အစီအစဉ် ရှိပါသလား။
ဖြေ ။ ။ အခွင့်အရေးပေးလာရင်တော့ အစီအစဉ် ရှိပါတယ်။
မေး ။ ။ မခရစ္စီက ကိုယ်တိုင်လည်း Transgender တယောက် ဖြစ်နေတယ်။ အဲဒီတော့ မခရစ္စတီရဲ့ နေ့စဉ်ဘဝမှာ တခြားသူတွေနဲ့ မတူဘူးဆိုတဲ့ ခံစားချက်တခု လွှမ်းမိုးနေတာမျိုး ရှိပါသလား။ ပြီးတော့ အများနဲ့မတူဘူးဆိုတဲ့ အသိကရော ရပ်တည်ရုန်းကန်ရတာ အခက်အခဲ ရှိပါသလား။
ဖြေ ။ ။ ဟုတ်ကဲ့ အစပထမပိုင်းမှာတော့ ရှိပါတယ်။ ရပ်တည်ရုန်းကန်ရတာ ပထမပိုင်းကတော့ Gay ပေါ့။ နောက်ပိုင်းမှာ Transgender ဖြစ်သွားတာပါ။ အဲဒီတော့ သူငယ်ချင်းအသိုင်းအဝိုင်းတွေက များသောအားဖြင့် လက်ခံတယ်ဆိုပေမယ့် တော်တော်များများကတော့ လက်ခံတယ် - ၈၀% လောက်ကတော့ လက်ခံတယ်။ ဒါပေမဲ့ ၂၀% ကတော့ သူတို့မှာ Grey Area လေး ရှိနေတာပေါ့။ သူတို့စိတ်ထဲမှာ သဘောကျသလိုလို၊ သဘောမကျသလိုလို ကိုယ့်ကိုယ်တော့ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ထုတ်မပြောဘူး။ ကိုယ့်ရှေ့မှာတော့ အပြုံးလေးတွေနဲ့ပေါ့။ ကွယ်ရာမှာပဲ ဆော်တာပေါ့။ အတင်းပြောတာတို့ ဘာညာ Negative Comments တွေ - ဒါတွေကတော့ ၂၀% လောက်တော့ ဘဝမှာ အခုလက်ရှိအထိ ရှိနေတုန်းပါပဲ။ ကြိုက်တဲ့လူလည်း ရှိတယ်။ မကြိုက်တဲ့လူလည်း ရှိတယ်။ အဲဒီတော့ ခရစ္စီကတော့ ဘာမှတော့ အဃာတတရား မထားပါဘူး။ ကိုယ်မှန်တယ်ထင်တာကို ကိုယ်လုပ်တယ်။ ပြီးတော့ ကိုယ်က ဘာကြောင့် ကိုယ်လို Transgender တွေ၊ LGBTQ တွေ အားလုံးကို လက်ခံနိုင်ရမလဲဆိုတဲ့ ကောင်းတဲ့ Message ကိုပဲ ပိုပေးဖို့ အမြဲတမ်း ကြိုးစားနေပါတယ်။
မေး ။ ။ ဒီဇာတ်ကားတိုလေးကို ဆက်ပြီးတော့ ရုပ်ရှင်ပွဲတော်တွေမှာ ပြသနေချိန်နဲ့ ဆုတွေရထားတဲ့ အခြေအနေလေးကို နည်းနည်းလေး ရှင်းပြပေးပါအုံး။
ဖြေ ။ ။ Film Festivals ငါးခု ရထားပြီးပါပြီ။ အဲဒီအထဲက နှစ်ခုကတော့ Academy Award Qualified Film Festival တွေ ဖြစ်တယ်။ အဲဒါကတော့ Oscar ပေါ့။ တစ်ခုကတော့ Raindance Film Festival ကတော့ London ကပါ။ အဲဒါကတော့ အကြီးမားဆုံး Independent Film Festival ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်တခုကတော့ Atlanta Out on Film Festival ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်တခုက Taiwan လည်း ရထားတယ်။ နောက်ပြီးတော့ Toronto Real Film Festival ကလည်း ရထားတယ်။ နောက်ပြီးတော့ အထူးခြားဆုံးကတော့ China ကလည်း ရထားတယ်။ China မှာက LGBTQ Rights နဲ့ ပတ်သက်ပြီး အဲဒီလောက် မရှိဘူး။ တခြား Film Festival တွေကလည်း ခရစ္စီတို့ကို အီမေးလ်တွေ ပို့ထားပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ Film Festival Rule က ဘာလဲဆိုတော့ သူတို့ရွေးချယ်လို့ရှိရင် သူတို့ဆီက Official ဆုတံဆိပ် မပေးမချင်း ခရစ္စီတို့အနေနဲ့ ကြေညာလို့ မရဘူး။ လောလောဆယ် Official ရထားတာတော့ (၅) ခုလို့ ပြောရမှာပေါ့။ ဒီလို ဗမာစကားပြော ဇာတ်ကားလေး ရသွားတဲ့အတွက် ခရစ္စီတို့တွေ ကမ္ဘာ့အလယ်မှာ နေရာလေးတခု ရသွားတဲ့အတွက်၊ ဒါက မြန်မာရုပ်ရှင် Industry အတွက်လည်း ကောင်းတဲ့ရလဒ်တခုလို့ပဲ ပြောချင်ပါတယ်။ ကိုယ့်ကျိုးအတွက်ပဲ ပြောတာမဟုတ်ဘူး။ အားလုံးအတွက် Myanmar Movie Industry အတွက် နောက်ပိုင်းမှာ ကိုရီးယားရုပ်ရှင်ကားတွေလို၊ နောက်ပြီးတော့ နောက်တခုပြောချင်တာက မြန်မာပြည်က အနုပညာရှင်တွေ၊ အနုပညာလုပ်ငန်းကို ဆက်မလုပ်၊ လုပ်ခွင့်မရတဲ့ အကုန်လုံး၊ တချို့လည်း ဖမ်းဆီးခံထားရတယ်။ အဲဒီအနုပညာရှင်တွေ အကုန်လုံးကိုလည်း အမြန်ဆုံးပြန်လွှတ်ပေးပါလို့ ခရစ္စီတို့ Burmese-American Movie Industry မှာ လုပ်နေတဲ့ Actors, Directors, Producers တွေက ဆန္ဒပြုလိုက်ပါတယ်။ မြန်မာ့ရုပ်ရှင်လုပ်ငန်းတွေလည်း ပြန်လည်သက်ဝင်လာပြီးတော့ ဒီလို ခရစ္စီတို့လို နိုင်ငံခြားမှာရောက်နေတဲ့ Burmese Immigrants တွေနဲ့ ပူးပေါင်းပြီးတော့ ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့ ရုပ်ရှင်တွေ ထုတ်လုပ်နိုင်ဖို့လည်း မျှော်လင့်ပါတယ်။
မမြသဇင်အောင် ။ ။ အခုလို အချိန်ပေးပြီးတော့ ဖြေကြားပေးတဲ့အတွက် ဒါရိုက်တာ Bruce Chu, နောက်ပြီးတော့ သရုပ်ဆောင်တွေဖြစ်တဲ့ မခရစ္စီအောင်၊ ကိုဇော်မျိုးထက်၊ ထုတ်လုပ်သူ ဝဏ္ဏမျိုးသိန်း အားလုံးကို ကျေးဇူးအများကြီးပဲ တင်ပါတယ်။
လူ့အခှငျ့အရေး တရပျဖွဈတဲ့ လိငျသတျမှတျခကျြကှဲလှဲသူ LGBTQ တှရေဲ့ အခှငျ့အရေးအတှကျ ကွိုးပမျးနရေဆဲဖွဈကွောငျး နိုငျငံတကာ ရုပျရှငျပှဲတျောတှမှော ပွသနတေဲ့ Imperfectly Complete “နတ်ထိရောငျ အိပျမကျ” ရုပျရှငျကားတို အဖှဲ့သားတှကေ ပွောပါတယျ။ မမွသဇငျအောငျ ဆကျသှယျ မေးမွနျးထားပါတယျ။
မေး ။ ။ ပထမဦးဆုံး ကမြ ထုတျလုပျသူ ကိုဝဏ်ဏမြိုးသိနျးကို မေးခငျြပါတယျ။ Imperfectly Complete “နတ်ထိရောငျ အိပျမကျ” လို့ နာမညျပေးထားတဲ့ မွနျမာ Transgender လိငျအင်ျဂါ ပွောငျးထားတဲ့သူ တယောကျရဲ့အကွောငျး ရုပျရှငျတိုလေးနဲ့ ပတျသကျပွီးတော့ သတငျးဌာနတခြို့မှာလညျး မေးမွနျးထားတာကို ကမြတို့ အမြားကွီးတှပေ့ါတယျ။ နောကျ မွနျမာဘာသာနဲ့ အင်ျဂလိပျဘာသာတို့နဲ့ ပွောထားတဲ့ ဒီဇာတျကားပျေါမှာ အသိအမှတျပွုတာတှေ ပိုပွီးတော့ တိုးလာနတောကိုလညျး တှတေ့ယျ။ ဆုတှေ ရတာကိုလညျးတှတေ့ယျ။ ဒီရုပျရှငျပှဲတျောတှမှော တျောတျောမြားမြား ပွသနတောတှလေညျး တှတေ့ယျ။ ဒီရုပျရှငျကားက မကျြမမွငျဂီတသမားတယောကျကို ကူညီစောငျ့ရှောကျပေးနတေဲ့ Transgender အမြိုးသမီးတယောကျရဲ့အကွောငျး။ အဲဒီတော့ ဂဈတာသမား လူငယျလေးက သူက မကျြကွညျလှာရပွီးတော့ အလှူရှငျရပွီးတော့ မကျြစိပွနျမွငျတော့မယျ့အခြိနျမှာ သူကို အမှနျအတိုငျး ဖှငျ့ပွောဖို့ ခကျနတေဲ့ Transgender တယောကျအကွောငျးကို ရိုကျကူးထားတာကိုလညျး ကမြတို့ သိရတယျ။ အဲဒီမှာ ကမြ သိခငျြတာက ဒီရုပျရှငျကားတိုလေးကို နတ်တိရောငျ အိပျမကျလို့ ဘာလို့နာမညျပေးထားတာပါလဲရှငျ့။
ဖွေ ။ ။ အဲဒီ idea က တကယျတမျး ရလာတာက ခရစ်စီဆီက ရပါတယျ။ She is part of the producer. ကနြျောတို့ decision လုပျတဲ့အခြိနျမှာ အားလုံးတိုငျပငျပွီး လုပျကွတယျ။ I think အဖွကေ most likely ခရစ်စီ ဖွရေငျ ပိုကောငျးမယျ ထငျပါတယျ။ ဖွဈခငျြတာလေးတခု မဖွဈနိုငျဘူး ဖွဈနတေယျဆိုတဲ့ Social injustice တခု။ In period တခု။ အဲဒါကွောငျ့ အိပျမကျက ထိလိုကျတယျ။ ဒါပမေဲ့ ပြောကျသှားတယျ။ ခဏပကျြပွယျသှားတယျ။ အဲဒီလိုသဘောမြိုးလို့ ကနြျောတော့ ယူဆတယျ။ ဒါပမေဲ့ ခရစ်စီ ဖွရေငျတော့ ပိုကောငျးတယျ။ နတ်တိရောငျ အိပျမကျ ဆိုတဲ့နာမညျက ခရဈတီ ရလာတဲ့ နာမညျပါ။
မေး ။ ။ မခရစ်စီ ဒီပျေါမှာ နညျးနညျးလေး ရှငျးပွပေးပါအုံး။
ဖွေ ။ ။ ပထမတုနျးကတော့ Imperfectly Complete လို့ပဲ ထားထားတာပေါ့။ အင်ျဂလိပျနာမညျပဲ ပေးထားကွမယျပေါ့။ နောကျကတြော့ ကမြတို့အားလုံး သသေခြောခြာ ပွနျစဉျးစားကွတယျ။ ဒါရိုကျတာ၊ ပရိုဂြူဆာတှေ - ဘာဖွဈလို့လဲဆိုတော့ Dialogue တှေ အကုနျလုံးက မွနျမာလို ပွောထားတာ တျောတျောမြားတယျ။ အဲဒါကွောငျ့ မွနျမာနာမညျပေးမှ ဖွဈမယျလို့ ပွနျဆုံးဖွတျကွတယျ။ ဆုံးဖွတျကွတော့ အကုနျလုံး နာမညျတှေ လြှောကျရှေးကွတယျ။ အဲဒီတော့ ဒီ story ရိုကျပွီးတဲ့အခါမှာ ကမြရဲ့ သူငယျခငျြး ရုပျရှငျမငျးသား New York မှာနတေဲ့ ဥက်ကာမငျးမောငျကို ပွောပွလိုကျတယျ။ ဒီဇာတျကားအတှကျ နာမညျလေး ရှာကွရအောငျဆိုပွီး သူနဲ့ ကမြတို့ ရှာကွတယျ။ သူက အဓိက ရှာပေးတယျ။ ပထမတော့ နတ်တိရောငျ ကောငျကငျ။ နောကျတခုက နတ်တိရောငျ အိပျမကျ။ နောကျတခုက နတ်တိရောငျ မိုးပွာ။ ဘာဖွဈလို့လဲဆိုတော့ နတ်တိရောငျ - နတ်တိဆိုတဲ့စကားက ဗလာနတ်တိက လာတာ။ သူကလညျး မကျြမမွငျဘူး။ သူ့ရဲ့ dream က သူ့ကိုယျသူလဲ ဘယျတော့ မကျြစိပွနျမွငျမလဲဆိုတာ မသိဘူး။ ခရစ်စီကလညျး အဲဒီအထဲမှာ Transgender တယောကျဆိုတော့။ ဒီ Transgender တယောကျရဲ့ ခဈြတဲ့အခဈြကို သူ့ကိုခဈြတဲ့အခဈြနဲ့ ညီမြှတဲ့အခဈြကို ပွနျလိုခငျြတယျ။ ပွနျလိုခငျြတော့ အဲဒီအခြိနျမှာ သူက ကိုယျ့ကိုယျ ပွနျခဈြပါ့မလားဆိုတဲ့ အိပျမကျကလဲ အကောငျထညျဖျောနိုငျမလား။ မဖျောနိုငျသလား မသိဘူး။ အဲဒီမှာ နှဈယောကျစလုံးက ဗလာနတ်တိ ဖွဈနတေဲ့ အိပျမကျတှနေဲ့ပေါ့။ အဲဒီမှာ ဗလာနတ်တိ အိပျမကျကိုမှ နာမညျတှေ စဉျးစားရငျနဲ့ နတ်တိရောငျ အိပျမကျလို့ ဖွဈသှားတာပါ။
မေး ။ ။ အခုဆကျပွီးတော့ မေးခငျြတာက ဒါရိုကျတာ Bruce ပါ။ အခုလို ဆုတှရေတာကို ဂုဏျယူပါတယျရှငျ။ Imperfectly Complete ရုပျရှငျဇာတျလမျးတိုက ဆုတှရေနသေလို၊ နိုငျငံတကာ ရုပျရှငျပွပှဲတှမှော ပွသနတောကိုလညျး တှရေ့ပါတယျ။ ဒီတော့ ဒီဇာတျကားကို ဖနျတီးခဲ့တဲ့ ဒါရိုကျတာတယောကျအနနေဲ့ ရှလြေှ့ောကျမှာကော ဒီဇာတျကားကို လူတှအေသိအမှတျ ပွုလာဖို့နဲ့ ဆုတှထေပျပွီးတော့ ရဖို့အတှကျ မြှျောလငျ့ထားပါသလားရှငျ့။
ဖွေ ။ ။ ကနြေျာ့အနနေဲ့ ဒီလောကျအထိ ဖွဈလာလိမျ့မယျလို့ မမြှျောလငျ့ထားပါဘူး။ တကယျ့ကို အံ့သွဝမျးသာမိပါတယျ။ ရုပျရှငျဖနျတီးသူတယောကျက သူ့ဇာတျကားမပွီးခငျ ပရိသတျတှအေကွိုကျ တှပေ့ါ့မလားဆိုတာကို ကွိုမသိနိုငျပါဘူး။ ဇာတျကားတိုငျးက သူတို့အတှကျ ကွိုးစားစမျးသပျမှုပါ။ အခု ဒီလိုဆုတှရေတော့ ပရိသတျက ကနြျောတို့ ဖနျတီးမှုကို မွတျနိုးတယျ၊ ကွိုကျတယျ။ ဒီအတှကျ ကနြျောတို့ တဖှဲ့သားလုံး ပြျောရှငျရသလို၊ စိတျလှုပျရှားရပါတယျ။
မေး ။ ။ ကိုဇျောမြိုးထကျက ဒီ Imperfectly Complete - နတ်တိရောငျအိပျမကျ ရုပျရှငျကားထဲမှာ အမွငျအာရုံကှယျနတေဲ့ ဂီတာသမား လူငယျတယောကျအနနေဲ့ သရုပျဆောငျထားပါတယျ။ ဒီကားမှာ ဘယျလိုစပွီးတော့ ပါဝငျသရုပျဆောငျ ဖွဈတာပါလဲ။
ဖွေ ။ ။ ကနြျောစပွီးတော့ သရုပျဖွဈတာက Bruce နဲ့ သိတာကတော့ တျောတျောကွာပွီ။ သုံးနှဈလေးနှဈလောကျတော့ ရှိပွီ။ အဲဒါနဲ့ သူက ဒီဇာတျညှနျးရေးပွီးတဲ့ အခြိနျမှာ သူက ဂီတာလညျးတီး၊ သီခငျြးလညျး ဆိုတတျတဲ့ သရုပျဆောငျတယောကျ လိုကျရှာနတေဲ့ အခြိနျမှာ သူက ကနြေျာ့ကို လာပွီးတော့ ကမျးလှမျးလာတယျ။ နောကျပွီးတော့ သူ့ရဲ့ဇာတျလမျးအကွောငျးကို ကနြေျာ့ကို ပွောပွတယျ။ ကနြျောက မိုကျတယျ။ ဇာတျလမျးလေးက တျောတျောကောငျးတယျ။ စိတျဝငျစားဖို့ကောငျးတယျ။ ကနြျောလညျး ဂီတာကိုယျတိုငျ တီးတတျတော့၊ မဆိုးဘူး - This is something I can contribute. ဇာတျလမျး။ နောကျပွီးတော့ မကျြမမွငျအနနေဲ့ သရုပျဆောငျရမညျဆိုတော့လညျး ဒါက Challenge တခုပေါ့။ ကနြျောလညျး စိတျဝငျစားသှားပွီးတော့ သူ ကမျးလှမျးလာတဲ့အခြိနျမှာ ကနြျော လကျခံလိုကျတယျ။
မေး ။ ။ ဒီဇာတျကားရိုကျကူးမယျဆိုတဲ့ အခြိနျမှာ အတားအဆီး အဟနျ့အတားတှေ ရှိသလား။ ကိုယျ့ရဲ့ ကိုယျပိုငျဆုံးဖွတျခကျြနဲ့ လှတျလှတျလပျလပျ ဆုံးဖွတျခှငျ့ရခဲ့တာလား။
ဖွေ ။ ။ ကိုယျ့ရဲ့ဆုံးဖွတျခကျြနဲ့ အတားအဆီးလညျး ဘာမှမရှိပါဘူး။ အကုနျလုံး မိဘတှေ၊ သူငယျခငျြးတှေ အကုနျလုံးကို ပွောပွတယျ။ သူတို့က ကောငျးတယျ၊ လုပျပေါ့။ ဇာတျလမျးလေးလညျး ကောငျးတယျ။ လုပျဆိုပွီးတော့ အားပေးကွတယျ။
မေး ။ ။ အဲဒီတော့ ကိုဝဏ်ဏရဲ့ ဒီဇာတျကားက သာမနျဇာတျလမျးကြောရိုးတခု မဟုတျဘူး။ အဲဒီတော့ သာမနျဇာတျလမျးကြောရိုးကို အခွခေံထားတဲ့ ဇာတျကားတခု မဟုတျဘူးပေါ့။ လိငျအင်ျဂါပွောငျးထားတဲ့ လူတယောကျရဲ့ မတ်ေတာတရားနဲ့ သူ့ရဲ့ခံစားခကျြတှကေို ဖှဲ့ဆိုထားတယျ။ ဒီလို ပုံမှနျသာမာရိုးကြ ဇာတျလမျးကြောရိုး မဟုတျတဲ့အတှကျ ရိုကျကူးတဲ့နရောမှာ ဘယျလို အခကျအခဲတှကေို ကွုံတှခေဲ့ရပါသလဲ။
ဖွေ ။ ။ ဒီဟာက Transgender လိငျအင်ျဂါ ပွောငျးထားတယျ ဘာညာပွောပမေယျ့။ Still ကနြျောတို့ Humanitarian လူအရကွညျ့ရငျ still they are people. ကနြျောတို့ ပုံမှနျအနအေထားဆိုရငျ လူမြိုးမတူလို့၊ ဘာသာမတူလို့ ခဈြလို့မရဘူး၊ ကွိုကျလို့မရဘူးဆိုတာ ရှိတာပဲ။ အခု ဒီဟာက ဆငျတူရိုးမာလေးလို့ ကနြျောက ယူဆပွီးတော့ သှားတာ။ အဲဒီတော့ ကနြျောကတော့ အရမျးပွဿနာ ဖွဈတယျလို့တော့ - Debate ဖွဈမယျလို့တော့ ကနြျောက မထငျဘူး။ This is still art. It’sagood art.
မေး ။ ။ အဲဒါဆိုရငျ မခရစ်စီကို အလှညျ့ပေးအုံးမယျ။ နိုငျငံတကာမှာတော့ လိငျအင်ျဂါကှဲပွားတယျ။ ပွောငျးတယျ။ လိငျစိတျကှဲပွားတယျဆိုတဲ့ လူတှပေျေါမှာ တနျးတူထားဖို့။ ပွီးတော့ ခှဲခွားပွီးတော့ မဆကျဆံဖို့။ ခှဲခွားမသတျမှတျဖို့ တောငျးဆိုဆျောသွနတောတှလေညျး ရှိပါတယျ။ ပွီးတော့ ကိုယျ့ကိုယျကို သတ်တိရှိရှိ ဖျောထုတျဖို့ အားပေးတာတှလေညျး ရှိပါတယျ။ ဒီလို နိုငျငံတကာရဲ့ အသိအမှတျပွုမှုတှေ ပိုပွီးတော့ ရလာတဲ့အခါမှာ ဒီရုပျရှငျအပျေါမှာ နိုငျငံတကာ အသိအမှတျပွုမှုတှေ ပိုပွီးတော့ ရလာတဲ့အတှကျ မွနျမာနိုငျငံလို လူ့အဖှဲ့အစညျးမှာကော လိငျစိတျကှဲပွားတဲ့လူ၊ ဒါမှမဟုတျ လိငျတူခဈြသူတှပေျေါမှာ အမြားစုရဲ့ အမွငျသဘောထားတှကေ ပွောငျးလဲလာမယျလို့ မြှျောလငျ့ပါသလား။
ဖွေ ။ ။ ဟုတျကဲ့ ခရစ်စီ မြှျောလငျ့ပါတယျ။ ၂၀၂၁ ကတော့ အရငျနှဈတှလေို မဟုတျတော့ဘူးပေါ့။ ဒါပမေဲ့ မွနျမာ့လူ့အသိုငျးအဝိုငျးမှာက ရှေးရိုးဆှဲအယူအဆတှေ ရှိတယျ။ နောကျပွီးတော့ Transgender တယောကျ၊ မိနျးမလြှာတယောကျ။ နောကျ လူအမြားနောကျပွီးပွောတဲ့စကားတို့၊ နှိမျပွီးပွောတဲ့စကားတို့ဆိုရငျတော့ အခွောကျပေါ့။ ဒါပမေဲ့ အဲဒါလဲ သာမာရိုးကစြကားလို ပွောလို့ရတယျ။ သူတို့က အဲဒီနာမညျကို ချေါရတာ တှငျနပွေီ။ ဒီမှာတော့ Transgender, Gay ဆိုလဲ Gay, Lesbian ဆိုလဲ Lesbian ပေါ့။ သူ့ဟာနဲ့သူ ရှိထားတယျ။ ဒါပမေဲ့ ခရစ်စတီတို့ အခု အရေးကွီးဆုံးက ဘာလဲဆိုတော့ Transgender Rights ကို တောငျးယူရပါမယျ။ Transgender Rights က Human Rights ပါပဲ။ အတူတူပါပဲ။ ဘာဖွဈလို့လဲဆိုတော့ Transgender တှကေလဲ Human ဖွဈလို့ပါပဲ။ သူက Transgender တယောကျဖွဈတယျ။ သူက Gay တယောကျဖွဈတယျ။ သူက Lesbian တယောကျ ဖွဈတယျဆိုပွီး အထူးအခှငျ့အရေးတှအေနနေဲ့ တောငျးဆိုတာ မဟုတျပါဘူး။ သာမနျလူတနျးစေ့ ရနတေဲ့ အခှငျ့အရေးကိုပဲ ခရစ်စီတို့က တောငျးဆိုနတောပါ။
ဒီမှာတော့ Transgender တှကေို Protect လုပျတဲ့ LGBTQ Protect လုပျတဲ့ Regulations, Laws တှေ ရှိကွတယျ။ ဒါပမေဲ့ ဒီနိုငျငံမှာတော့ ပှငျ့ပှငျ့လငျးလငျး ဖွဈနပွေီ။ စဈတပျထဲမှာလညျး LGBTQ လူတယောကျအနနေဲ့ ဝငျပွီးတော့ အမှုထမျးလို့ရတယျ။ ဘယျရုံးမှာမဆို တကျလို့ရတယျ။ ဘယျအစိုးရဝနျထမျးမဆို ဝငျလုပျလို့ရတယျ။ Governor တို့၊ တခြို့ ပွညျနယျက Governor တှေ၊ ဘာတှဆေိုရငျ အကုနျလုံး Transgender တှေ ဖွဈနကွေတာ ဒီနိုငျငံ။ အဲဒီတော့ ခရစ်စတီတို့အနနေဲ့ ကမ်ဘာ့နိုငျငံတှနေဲ့ ရငျဘောငျတနျးပွီးတော့ ခရစ်စတီတို့ နိုငျငံမှာလဲ Transgender Rights, LGBTQ rights တှေ၊ ဒီ NCPTQ တှကေို Protect လုပျပေးနိုငျမယျ့ လူ့အဖှဲ့အစညျးတှကေ Advocate တှေ မားမားမတျမတျ ရပျတညျပေးမယျ့ လူတှကေတော့ ပိုမိုလိုအပျလာတယျလို့ ထငျတာပဲ။ အဲဒီလိုလူတှေ၊ အဖှဲ့အစညျးတှေ ရှိမှ။ ဒီ Transgender, LGBTQ အသိုငျးအဝိုငျးကွီးက ပိုမိုတိုးတကျတဲ့ လူ့အဖှဲ့အစညျးတခုကို ရောကျသှားမယျလို့ ကနြျော ထငျပါတယျ။
မေး ။ ။ အထူးသဖွငျ့တော့ Asia မှာပေါ့ ရှေးရိုးဆှဲအယူအဆကို ကိုငျဆှဲတာမြားတဲ့ လူမှုအသိုငျးအဝိုငျးတှအေတှငျးမှာ Transgender တှေ လိငျစိတျခံယူခကျြ ကှဲပွားသူတှနေဲ့ ပတျသကျပွီးတော့ ခှဲခွားဆကျဆံတာတှေ၊ လကျမခံတာမြိုးတှေ ရှိပါတယျ။ ဒီလိုအသိုငျးအဝိုငျးဟာ ဒီရုပျရှငျဇာတျလိမျးတိုလေးက ရိုကျခတျမှုတခု ရှိလာမယျလို့ ထငျပါသလား။ ဒီရုပျရှငျဇာတျလမျးကတဆငျ့ အပွောငျးအလဲတခုခု ဖွဈလာမယျလို့ မြှျောလငျ့သလား။ နောကျပွီးတော့ ဒီလိုလိငျစိတျခံယူခကျြ ကှဲပွားတဲ့လူတှကေို လူမှုအသိုငျးအဝိုငျးမှာ ပိုပွီးတော့ အသိအမှတျပွုလာမယျလို့ကော ထငျမိပါသလားရှငျ။
ဖွေ ။ ။ LGBTQ တှနေဲ့ ပတျသကျတဲ့ ဇာတျလမျးတှကေို ပိုလုပျခငျြတယျဆိုတာ သူတို့အကွောငျး လူမှုအသိုငျးအဝိုငျးက ပိုပွီးသိလာအောငျလို့ပါ။ သူတို့အကွောငျး ပိုပွီးသိလာရငျ သူတို့နဲ့ ဝေးကှာတယျလို့ မခံစားရတော့ဘူးပေါ့။ ဒါကွောငျ့ ကနြျောထငျပါတယျ။ အထူးသဖွငျ့ ဒီဇာတျလမျးမှာ ပြျောစစေရာ အဆုံးသတျထားတာက တခွား LGBT ဇာတျလမျးတှနေဲ့ မတူတာပါ။ တခွားဇာတျလမျးတှမှောက သူတို့ကို မကောငျးမွငျတဲ့သဘော ပုံဖျောကွတာ မြားပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ ကနြျောတငျပွခငျြတာက ဒီလို Transgender တယောကျဟာလဲ ကောငျးမှနျတဲ့ ဆကျဆံရေး ရှိတယျ။ ခဈြခငျြးမတ်ေတာ ရှိတယျ။ သူတို့က ရဲစှမျးသတ်တိ ရှိသလို၊ အကွငျနာတတျတယျဆိုတာကို ပွသခငျြတာပါ။ တကယျက ဒီမတိုငျမီ မနှဈက တခွားရုပျရှငျဇာတျလမျးတခု ရိုကျဖို့ စီစဉျထားတာပါ။ ခရစ်စတီရဲ့ တကယျဖွဈရပျမှနျဇာတျလမျးပေါ့။ ဒါပမေဲ့ ကိုဗဈကွောငျ့ မလုပျဖွဈခဲ့ပါဘူး။ ဒါကွောငျ့ ဒီအတိုငျး စောငျ့နမေယျ့အစား၊ နောကျတခု ဇာတျလမျးတိုလုပျရငျ အဖှဲ့သားတှေ တယောကျအကွောငျးတယောကျ ပိုနားလညျလာမယျပေါ့။ ဒါက ရုပျရှငျဖွဈလာတဲ့အစပါပဲ။ အစတုနျးကတော့ ဒီဇာတျလမျးမှာ ဇာတျကောငျနရောက ဂီတသမား မဟုတျပါဘူး။ ပနျးခြီဆရာပါ။ ဒါပမေဲ့ အဲဒီလိုဆိုရငျ ကနြျောတို့ရဲ့ ဘတျဂကျြနဲ့ မလောကျနိုငျပါဘူး။ ဒီတော့ ဂီတသမားဆိုရငျ ကောငျးမယျလို စဉျးစားလိုကျပါတယျ။ ဇျောကလညျး သီခငျြးဆိုကောငျးသလို၊ ဂီတာလညျး တီးတတျပါတယျ။ အဆငျပွပေါတယျ။
မေး ။ ။ ကိုဇျောမြိုးထကျကို ထပျမေးခငျြတာက တခုကတော့ ဒီရုပျရှငျကားလေးကနေ ကိုဇျောမြိုးထကျအနနေဲ့ ဘာတှထေပျပွီး မြှျောလငျ့ထားတာ ရှိပါသလဲ။
ဖွေ ။ ။ နောကျထပျ အမြားကွီးပွိုငျနိုငျပွီးတော့ ဆုတှအေမြားကွီး ရနိုငျပါစလေို့ မြှျောလငျ့ပါတယျ။
မေး ။ ။ နောကျထပျကော ဒီလိုဇာတျလမျးမြိုးတှကေို ပါဝငျပွီးတော့ သရုပျဆောငျဖို့ အစီအစဉျ ရှိပါသလား။
ဖွေ ။ ။ အခှငျ့အရေးပေးလာရငျတော့ အစီအစဉျ ရှိပါတယျ။
မေး ။ ။ မခရစ်စီက ကိုယျတိုငျလညျး Transgender တယောကျ ဖွဈနတေယျ။ အဲဒီတော့ မခရစ်စတီရဲ့ နစေ့ဉျဘဝမှာ တခွားသူတှနေဲ့ မတူဘူးဆိုတဲ့ ခံစားခကျြတခု လှမျးမိုးနတောမြိုး ရှိပါသလား။ ပွီးတော့ အမြားနဲ့မတူဘူးဆိုတဲ့ အသိကရော ရပျတညျရုနျးကနျရတာ အခကျအခဲ ရှိပါသလား။
ဖွေ ။ ။ ဟုတျကဲ့ အစပထမပိုငျးမှာတော့ ရှိပါတယျ။ ရပျတညျရုနျးကနျရတာ ပထမပိုငျးကတော့ Gay ပေါ့။ နောကျပိုငျးမှာ Transgender ဖွဈသှားတာပါ။ အဲဒီတော့ သူငယျခငျြးအသိုငျးအဝိုငျးတှကေ မြားသောအားဖွငျ့ လကျခံတယျဆိုပမေယျ့ တျောတျောမြားမြားကတော့ လကျခံတယျ - ၈၀% လောကျကတော့ လကျခံတယျ။ ဒါပမေဲ့ ၂၀% ကတော့ သူတို့မှာ Grey Area လေး ရှိနတောပေါ့။ သူတို့စိတျထဲမှာ သဘောကသြလိုလို၊ သဘောမကသြလိုလို ကိုယျ့ကိုယျတော့ ပှငျ့ပှငျ့လငျးလငျး ထုတျမပွောဘူး။ ကိုယျ့ရှမှေ့ာတော့ အပွုံးလေးတှနေဲ့ပေါ့။ ကှယျရာမှာပဲ ဆျောတာပေါ့။ အတငျးပွောတာတို့ ဘာညာ Negative Comments တှေ - ဒါတှကေတော့ ၂၀% လောကျတော့ ဘဝမှာ အခုလကျရှိအထိ ရှိနတေုနျးပါပဲ။ ကွိုကျတဲ့လူလညျး ရှိတယျ။ မကွိုကျတဲ့လူလညျး ရှိတယျ။ အဲဒီတော့ ခရစ်စီကတော့ ဘာမှတော့ အဃာတတရား မထားပါဘူး။ ကိုယျမှနျတယျထငျတာကို ကိုယျလုပျတယျ။ ပွီးတော့ ကိုယျက ဘာကွောငျ့ ကိုယျလို Transgender တှေ၊ LGBTQ တှေ အားလုံးကို လကျခံနိုငျရမလဲဆိုတဲ့ ကောငျးတဲ့ Message ကိုပဲ ပိုပေးဖို့ အမွဲတမျး ကွိုးစားနပေါတယျ။
မေး ။ ။ ဒီဇာတျကားတိုလေးကို ဆကျပွီးတော့ ရုပျရှငျပှဲတျောတှမှော ပွသနခြေိနျနဲ့ ဆုတှရေထားတဲ့ အခွအေနလေေးကို နညျးနညျးလေး ရှငျးပွပေးပါအုံး။
ဖွေ ။ ။ Film Festivals ငါးခု ရထားပွီးပါပွီ။ အဲဒီအထဲက နှဈခုကတော့ Academy Award Qualified Film Festival တှေ ဖွဈတယျ။ အဲဒါကတော့ Oscar ပေါ့။ တဈခုကတော့ Raindance Film Festival ကတော့ London ကပါ။ အဲဒါကတော့ အကွီးမားဆုံး Independent Film Festival ဖွဈပါတယျ။ နောကျတခုကတော့ Atlanta Out on Film Festival ဖွဈပါတယျ။ နောကျတခုက Taiwan လညျး ရထားတယျ။ နောကျပွီးတော့ Toronto Real Film Festival ကလညျး ရထားတယျ။ နောကျပွီးတော့ အထူးခွားဆုံးကတော့ China ကလညျး ရထားတယျ။ China မှာက LGBTQ Rights နဲ့ ပတျသကျပွီး အဲဒီလောကျ မရှိဘူး။ တခွား Film Festival တှကေလညျး ခရစ်စီတို့ကို အီမေးလျတှေ ပို့ထားပါတယျ။ ဒါပမေဲ့ Film Festival Rule က ဘာလဲဆိုတော့ သူတို့ရှေးခယျြလို့ရှိရငျ သူတို့ဆီက Official ဆုတံဆိပျ မပေးမခငျြး ခရစ်စီတို့အနနေဲ့ ကွညောလို့ မရဘူး။ လောလောဆယျ Official ရထားတာတော့ (၅) ခုလို့ ပွောရမှာပေါ့။ ဒီလို ဗမာစကားပွော ဇာတျကားလေး ရသှားတဲ့အတှကျ ခရစ်စီတို့တှေ ကမ်ဘာ့အလယျမှာ နရောလေးတခု ရသှားတဲ့အတှကျ၊ ဒါက မွနျမာရုပျရှငျ Industry အတှကျလညျး ကောငျးတဲ့ရလဒျတခုလို့ပဲ ပွောခငျြပါတယျ။ ကိုယျ့ကြိုးအတှကျပဲ ပွောတာမဟုတျဘူး။ အားလုံးအတှကျ Myanmar Movie Industry အတှကျ နောကျပိုငျးမှာ ကိုရီးယားရုပျရှငျကားတှလေို၊ နောကျပွီးတော့ နောကျတခုပွောခငျြတာက မွနျမာပွညျက အနုပညာရှငျတှေ၊ အနုပညာလုပျငနျးကို ဆကျမလုပျ၊ လုပျခှငျ့မရတဲ့ အကုနျလုံး၊ တခြို့လညျး ဖမျးဆီးခံထားရတယျ။ အဲဒီအနုပညာရှငျတှေ အကုနျလုံးကိုလညျး အမွနျဆုံးပွနျလှတျပေးပါလို့ ခရစ်စီတို့ Burmese-American Movie Industry မှာ လုပျနတေဲ့ Actors, Directors, Producers တှကေ ဆန်ဒပွုလိုကျပါတယျ။ မွနျမာ့ရုပျရှငျလုပျငနျးတှလေညျး ပွနျလညျသကျဝငျလာပွီးတော့ ဒီလို ခရစ်စီတို့လို နိုငျငံခွားမှာရောကျနတေဲ့ Burmese Immigrants တှနေဲ့ ပူးပေါငျးပွီးတော့ ပိုမိုကောငျးမှနျတဲ့ ရုပျရှငျတှေ ထုတျလုပျနိုငျဖို့လညျး မြှျောလငျ့ပါတယျ။
မမွသဇငျအောငျ ။ ။ အခုလို အခြိနျပေးပွီးတော့ ဖွကွေားပေးတဲ့အတှကျ ဒါရိုကျတာ Bruce Chu, နောကျပွီးတော့ သရုပျဆောငျတှဖွေဈတဲ့ မခရစ်စီအောငျ၊ ကိုဇျောမြိုးထကျ၊ ထုတျလုပျသူ ဝဏ်ဏမြိုးသိနျး အားလုံးကို ကြေးဇူးအမြားကွီးပဲ တငျပါတယျ။